China BOREAS III Airflow Big Ceiling Fan Manufacturing sy Factory | Kale
EURUS III Ceiling Fan
DIAMOND Ceiling Fan
AIRCOOL Ceiling Fan
EURUS II Ceiling Fan
BOREAS II Ceiling Fan
BOREAS III Fan Plafond
AIRMOVE Portable Fan
AIRFREE Wall Fan
AIRPOLE Pedestal Fan
BOREAS III Airflow Big Ceiling Fan
KALE 7.3M Big Industrial Ceiling Fan miaraka amin'ny Motor PMSM
Ny andiany BOREAS III dia mpankafy vaovao novolavolaina mifototra amin'ny PMSM, ny savaivony ambony indrindra dia mety hahatratra 7.3 metatra. Rehefa mitambatra amin'ny rivotra dia afaka mifangaro tanteraka ny rivotra ao an-trano, afaka mamonjy mihoatra ny 50% ny herinaratra. Ny BOREAS III dia mampiroborobo ny fivezivezena amin'ny fikorianan'ny habakabaka miaraka amin'ny fahombiazana avo dia avo mba hahatratrarana ny tanjon'ny mpiasa mangatsiaka.
Ny andian-dahatsoratra BOREASIIII novolavolain'ny KALE ENVIRONMENTAL dia mifototra amin'ny fivoaran'ny teknolojia PMSM (motera synchronous andriamby maharitra). Ny savaivony ambony indrindra dia mety ho hatramin'ny 7.3 metatra.Ny vokatra dia mampifandray ny teknolojia aerodynamic, ny fifindran'ny dinamika, ny teknolojia fanaraha-maso PWM, ny mekanika mekanika, ny teknolojia simulation, ny fanaraha-maso ny fifandraisana, ny famolavolana indostrialy ary ny disciplines feno hafa. , hahatratra ny tanjon'ny fampidinana ny hafanan'ny mpiasa, ary hanatsara ny fampiononana ny tontolo iainana.
BOREAS III dia KALE mpankafy valindrihana malaza. Misy karazany efatra ny vokatra amin'ny masontsivana samy hafa, toy ny 4.9m, 5.5m, 6.1m ary 7.3m, dia be mpampiasa amin'ny indostria sy ny toerana ara-barotra amin'ny kalitao avo sy tsara indrindra.
Torque 1.300NM izay maotera PMSM mahery indrindra ary afaka mitondra rivotra be dia be.
2.Dynamic, tena mahomby, maharitra ela, tabataba ambany, ary midadasika ny hafainganam-pandeha.
3. Maimaim-poana ny fikojakojana mandrakizay, tsy mila manova menaka tsy tapaka.
4. Habe kely kokoa sy lanja maivana kokoa.
Fitaovana elektrika marika Schneider, miaraka amin'ny maody fiarovana fiarovana amin'ny trano izay hanakatona ny famoahana ho azy raha misy loza.
Ny kabinetra fanaraha-maso marika Alemana, nandalo ny EMC tamin'ny alàlan'ny mari-pankasitrahana SGS sy CCC, nandritra izany, dia nandalo fitsapana manohitra ny mandady izay miaro amin'ny fomba mahomby ny fitsabahana elektromagnetika.
Ny haavon'ny fiarovana dia IP55, mandalo fanamarinana UL, EMC, LVD, ROHS.
Connector ho an'ny fanblade
KALE tsy manam-paharoa patented palitao-karazana connector mampiasa telo mangatsiaka forging dingana + andriamby hery fitotoana dingana + anodic oxidation dingana, fiaramanidina mafy aluminium 7050 fahanterana hafanana fitsaboana, fanamarinana avy amin'ny nasionaly ny kalitaon'ny fisafoana foibe, dia mitondra mihoatra ny an-tapitrisany ny reraka andrana, tanteraka. mamaha ny olana amin'ny fiatoana sy ny fiatoana vokatry ny fandehanana ela!
Ny karazana empennage dia hita hatrany amin'ny fiaramanidina sy ny hazakazaka môtô, saingy tsy natao ho an'ny hatsaran-tarehy. Ny Eddies dia hiforona amin'ny faran'ny lelan'ny fanamafisam-peo mirindra rehefa mandeha ny rivotra. Miaraka amin'ny winglet, ity ampahany amin'ny fahaverezan'ny angovo ity dia hosorohana, ny mpankafy dia mihazakazaka tsy tapaka, izay hitondra fiantraikany ara-toekarena.
Hafainganam-pandeha ambony indrindra
Ny haavon'ny tabataba
2.6Amps / 220V
teo aloha: Orinasa mpankafy valin-drihana lehibe avo lenta any Shina - EURUS II Fampiasana Fandaniam-baravarankely - mpankafy Kale
Manaraka: BOREAS II 5 Blades Industrial Ceiling Fan
Airflow Big Ceiling Fan
Horonantsary misimisy kokoa Eto
Adiresy: 16F Building B, SOHO Zhongshan Plaza, Changning District, Shanghai, Shina
, © Copyright - 2010-2019 : Zo rehetra voatokana.